သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
1 သက်သာလောနိတ် 1
1:1 ပေါလုနှင့် Sylvanus နှင့်တိမောသေ, သက်သာလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုမှ, in God the Father and the Lord Jesus Christ.
1:2 သငျသညျမှကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး. We give thanks to God always for all of you, keeping the memory of you in our prayers without ceasing,
1:3 remembering your work of faith, and hardship, and charity, and enduring hope, in our Lord Jesus Christ, ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငါတို့အဘတည်းဟူသော.
1:4 For we know, ကိုညီအစျ, beloved of God, of your election.
1:6 ဆိုတော့, you became imitators of us and of the Lord, accepting the Word in the midst of great tribulation, but with the joy of the Holy Spirit.
1:10 and to the expectation of his Son from heaven (whom he raised up from the dead), ယရှေုသညျ, who has rescued us from the approaching wrath.
1 သက်သာလောနိတ် 2
2:1 For you yourselves know, ကိုညီအစျ, that our acceptance among you was not empty.
2:2 အဲဒီအစား, having previously suffered and been treated shamefully, မင်းသိတဲ့အတိုင်း, at Philippi, we had confidence in our God, so as to speak the Gospel of God to you with much solicitude.
2:4 ဒါပေမယ့်, just as we have been tested by God, so that the Gospel would be entrusted to us, so also did we speak, not so as to please men, but rather to please God, who tests our hearts.
2:5 And neither did we, အချိန်မရွေး, become flattering in speech, မင်းသိတဲ့အတိုင်း, nor did we seek an opportunity for avarice, as God is witness.
2:9 For you remember, ကိုညီအစျ, our hardship and weariness. We preached the Gospel of God among you, working night and day, so that we would not be burdensome to any of you.
2:13 For this reason also, we give thanks to God without ceasing: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, when you had accepted from us the Word of the hearing of God, you accepted it not as the word of men, ဒါပေမဲ့ (as it truly is) as the Word of God, who is working in you who have believed.
2:14 သင့်အတွက်, ကိုညီအစျ, have become imitators of the churches of God which are at Judea, ယေရှုခရစ်၌. သင့်အတွက်, လွန်း, have suffered the same things from your fellow countrymen as they have suffered from the Jews,
2:17 And we, ကိုညီအစျ, having been deprived of you forashort time, in sight, but not in heart, have hurried all the more to see your face, withagreat desire.
2:18 For we wanted to come to you, (တကယ်ပါပဲ, ငါ, ရှင်ပေါလု, attempted to do so once, and then again,) but Satan impeded us.
1 သက်သာလောနိတ် 3
3:1 ဒီအတွက်ကြောင့်, willing to wait no longer, it was pleasing to us to remain at Athens, တယောက်တည်း.
3:7 ရလဒ်အနေဖြင့်, we were consoled in you, ကိုညီအစျ, in the midst of all our difficulties and tribulations, through your faith.
3:12 ထိုအခါသခင်ဘုရားသည်သင်တို့ကိုများပြားစေခြင်းငှါ, သငျတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မျက်နှာသို့အပေါင်းတို့နှင့်မျက်နှာသို့သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအတွက်ပွါးများစေပါ, ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ဆီသို့ပြုပါသကဲ့သို့,
3:13 အပြစ်တင်ခြင်းမရှိဘဲသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုမြဲမြံစေနိုင်ရန်အတွက်, မြတ်မှုကိုအတွက်, ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငါတို့အဘတည်းဟူသော, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ပြန်လာဆီသို့, အားလုံးသူ့အသန့်ရှင်းသူ. အာမင်.
1 သက်သာလောနိတ် 4
4:1 ထို့ကြောင့်, အခြားအမှုအရာအရာမှာ, ကိုညီအစျ, အကြှနျုပျတို့သညျကိုမေးနှင့်တောင်းရမ်းစားသောက်, သခင်ယေရှုခရစ်၌, ကြောင်း, သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှသင်လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်အပ်သောအရာအတွက်လမ်းကိုခံရကြပြီရုံအဖြစ်, ထိုနည်းတူသင်လမ်းလျှောက်စေခြင်းငှါ, သင်တို့ရှိသမျှသည် ပို. ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှါနိုင်ရန်အတွက်.
4:8 ဆိုတော့, whoever despises these teachings, does not despise man, but God, who has even provided his Holy Spirit within us.
4:10 ဧကန်အမှန်အဘို့, you act in this way with all the brothers in all of Macedonia. But we petition you, ကိုညီအစျ, so that you may abound all the more,
4:13 And we do not want you to be ignorant, ကိုညီအစျ, concerning those who are sleeping, so as not to be sorrowful, like these others who do not have hope.
4:17 နောက်တစ်ခု, we who are alive, who are remaining, shall be taken up quickly together with them into the clouds to meet Christ in the air. နှင့်ဤလမ်းအတွက်, we shall be with the Lord always.
4:18 ထို့ကြောင့်, console one another with these words.
1 သက်သာလောနိတ် 5
5:1 But concerning dates and times, ကိုညီအစျ, you do not need us to write to you.
5:4 သင်တို့မူကား,, ကိုညီအစျ, are not in darkness, so that you would be overtaken by that day as byathief.
5:6 ထို့ကြောင့်, let us not sleep, as the rest do. အဲဒီအစား, we should be vigilant and sober.
5:8 ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့, who are of the daylight, should be sober, being clothed with the breastplate of faith and of charity and having, asahelmet, the hope of salvation.
5:10 who died for us, သောကြောင့်, whether we watch, or whether we sleep, we may live in union with him.
5:11 ဒီအတွက်ကြောင့်, console one another and build up one another, just as you are doing.
5:12 And we ask you, ကိုညီအစျ, to recognize those who labor among you, and who preside over you in the Lord, and who admonish you,
5:14 And we ask you, ကိုညီအစျ: correct the disruptive, console the weak-minded, support the sick, be patient with everyone.
5:15 See to it that no one repays evil for evil to anyone. အဲဒီအစား, always pursue whatever is good, with one another and with all.
5:25 ညီအစျကို, pray for us.
5:28 May the grace of our Lord Jesus Christ be with you. အာမင်.